नेपाल आज | नाटकीय विवाह, हप्ता दिन नपुग्दै विच्छेद !
नाटकीय विवाह, हप्ता दिन नपुग्दै विच्छेद !
बुधबार, ०४ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । बागलुङ हरिचौरस्थित काशीराम गौतम हिजोआज कहिले गृह मन्त्रालय, कहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत त कहिले पुल्चोकस्थित उच्च अदालतमा भेटिन्छन्। बुहारीको माइती पक्षले दिनुसम्म दुःख दिएपछि उनी सुरक्षा र न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। पाँच÷छ वर्षअघि उनका छोरासँग नाटकीय रूपमा बिहे गरेकी सुस्मिता पौडेलको माइती पक्षले अहिले डर र धम्की दिँदै धनसम्पत्ति माग्न थालेको उनी बताउँछन्। ‘लामो समय विदेश बसियो, यहाँको समाजसँग त्यति घुलमिल हुन पाइएन, छोराको बिहेको कुरा आफन्तबाटै अघि बढ्यो,’ काशीरामले भने, ‘तर सम्पत्तिको प्रलोभनमा केटी पक्षले नाटकीय बिहे गराएको रहेछ, बिहेको सात÷आठ दिनमै केटी पक्षबाट डिभोर्स गर्ने निर्णय भयो, त्यसपछि सम्पत्ति र पैसाको बार्गेनिङ गर्न थालियो।’
काशीराम २० वर्षदेखि हङकङ र बेलायतमा बस्दै आएका थिए। छोराछोरी पनि त्यतै हुर्काए। छोरा कृष्णप्रसाद हुर्किसकेकाले २०६९ सालमा नेपाल फर्केर बिहे गरिदिने निर्णय परिवारले गर्यो। आफू नेपालमा नबसेकाले काशीरामले आफन्तलाई बेहुली खोज्न लगाए। बेहुली खोजेर बिहेको साइत जुराइएपछि केटा पक्षकाले बिहेको भव्य तयारी थाल्यो। तामझामका साथ विवाह सम्पन्न भयो। तर बिहेको दुई÷चार दिनमै थाहा भयो, आफन्तले उनका छोराको जीवनमाथि ठूलो बज्रपात ल्याउनेगरी बेहुली खोजिदिएका रहेछन्।
आफन्तकै सिफारिसमा २०६९ माघ २४ गते चितवन कालिकास्थानकी माया बरालसँग कृष्णप्रसादको पहिलो बिहे भएको थियो। तर उनीहरूको सम्बन्ध धेरै दिनसम्म टिकेन। आफन्तका माध्यमबाट खोजिएकी बेहुली मानसिक रोगी रहिछन्। बाध्यतावश सम्बन्ध–विच्छेद भयो। पछि २०७१ मंसिर ११ गते नवलपरासी गैंडाकोटकी सुस्मितासँग कृष्णप्रसादको दोस्रो बिहे भयो। तर सम्पत्तिको प्रलोभनमा परेर बेहुलाका केही आफन्त र बेहुली पक्षकाले केटीलाई फकाएर ‘नाटकीय रूपमा’ बिहे गर्न लगाएका रहेछन्। विवाहको दुई–चार दिनमै केटी (बेहुली) ले केटा (बेहुला) सँग विवाहअघि नै आफ्नो अर्को केटासँग ‘अफेयर’ चलेको जानकारी गराउँदै छुट्ने संकेत दिइन्।
बेहुलीले अफेयर चलेको भनिएको केटाको फोटोसमेत देखाएपछि कृष्णप्रसादले सो कुरा परिवारलाई सुनाएका थिए। विवाह भएको साता दिन नबित्दै त्यस्तो खबर सुन्दा परिवारमा नयाँ बुहारी भित्र्याएको खुसी क्षणभरमै टुट्यो। बेहुली सुस्मिताले अरूलाई थाहै नदिई सम्बन्ध–विच्छेद गरौं भन्ने माग गरेपछि कृष्णप्रसादले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गएर सम्बन्ध–विच्छेद गरे। सम्बन्ध–विच्छेद भएको केही दिनपछि बेहुली पक्षले कृष्णप्रसादसँग सम्पत्ति माग गर्यो। घटना घटनापछि भएको सम्पत्ति मागले गौतम परिवार छक्क पर्यो । विस्तृत समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
मेलम्चीको काम पुन: सुचारु
सीआईबीमै अड्कियो ललिता निवासको छानबिन !
भोकमरीको सुचिमा नेपाल ७३ औं स्थानमा !
'फेरी एकपटक जंगल जान र आन्दोलन गर्न मन छ' : दाहाल